အဘယ်အရာကို Provence ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုခုနှစ်တွင်ကြည့်ရှုပါရန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အဘယ်အရာကို Provence ပြင်သစ်နိုင်ငံကိုခုနှစ်တွင်ကြည့်ရှုပါရန်
ဘဝတစ်နှေးကွေးအရှိန်အဟုန်င် အကယ်. သင်ရှာနေ, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေ. ရုပ်ပုံ; လာဗင်ဒါ၏လယ်ကွက်, နေရောင်, နှင့်သံလွင်ပင်များ။ ရွာရင်ပြင်ရှိလေယာဉ်ပင်များ၏အရိပ်အောက်တွင်တနင်္ဂနွေနေ့လည်စာ, တစ်ဦးနှင့်အတူဒွန်တွဲနေတဲ့လမ်းဘေးကဖေးမှာဖီး creme သစ်တောမှတဆင့်အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက် တစ်ဦးအစာခြေအဖြစ်ပိတ်ပင်နှင့်သစ်အယ်သီးသစ်ပင်. ဤသည် Provence ဖြစ်ပါသည် – အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်နှင့်မည်သို့ရှိရဖို့.
ဤသည်ကျယ်ပြန့် contrast နဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုဒေသဖြစ်ပါသည်. Provence ရိုးရှင်းသောပျော်မွေ့နေတဲ့မကျြနှာဖုံးအောက်မှာသူ့ရဲ့ရှုပ်ထွေးဖုံးကွယ်. ဒါဟာ Esterel တောင်အနီရောင်အရောင်များမှနေရာဖြစ်သည်, tapenade ၏အရသာကို, Rosemary ၏ရနံ့, အဆိုပါ Provencal ဝဲ၏ cadence, ပြီးနောက် Mistral, အဆိုပါအဲလ်ပ်တောင်တန်းမှဆင်းမှုတ်သောလေတိုက်. ဒီအတိုင်းတော့, အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်ကျယ်ပြန့်များမှာ, လွန်း! ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကူညီကွပါစို့!
Provence - အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်: အတတ်ပညာ
မတ်လ 1st ထံမှ, 2019 ဇန်နဝါရီလ5မှ, 2020, လေယာဉ်တင်သင်္ဘောက de Lumieres, ယခင်သောကျောက်ကျောက်မိုင်းအတွက်စွဲငြိဖွယ်ရာအနုပညာပြတိုက်ကိုဖွင့် က Les Baux-de-Provence, Vincent Van Gogh ရဲ့လက်ရာထံအပ်နှံထားတဲ့ပြပွဲအိမ်ရှင်အဖြစ်.
Provence နှင့်အတူ Van Gogh ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတစ်ဦးနှင့်နီးစပ်သူတဦးတည်းခဲ့. အဆိုပါပန်းချီဆရာကဒီပြင်သစ်ဒေသတွင်း၌သူ၏အသက်တာ၏အနှစ်၏နောက်ဆုံးစုံတွဲသုံးစွဲ, အံ့ဖှယျအလင်းနှင့်ရှုခင်းထဲမှာစိမ်. သူကပဲရစ်မှပြောင်းရွှေ့ အားလ်စ တွင် 1888, သူယုံကြည်အဖြစ် “အသစ်သောအနုပညာတစျခုလုံးအနာဂတ်မီဒီများတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်” နှင့်အတွင်းခိုလှုံခွင့်ပေးဖို့ဝန်ခံခဲ့သည် Saint-Remy-de-Provence သူ့ကျန်းမာရေးငြင်းဆန်သည့်အခါ. နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤအရပ်တို့ကိုမိမိအအကျော်ကြားဆုံးပန်းချီကားအချို့ကိုမှုတ်သွင်းနှင့်သူ၏ထူးခြားသောစတိုင်လ်စုစည်း. ပြပွဲရဲ့လူကြိုက်များမှုကြောင့်, အကြှနျုပျတို့သညျထိုအပေါ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်အကြံပြု က de Lumieres က်ဘ်ဆိုက် Carrieres.
လိုင်ယွန် Provence ရထား pricess ရန်
Provence - အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်: သူ၏ခေတ်သစ် Marseilles
ဤသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပြတိုက်စူးစမ်း သမိုင်း, ယဉျကြေးမှု, နှင့်မြေထဲပင်လယ်ဒေသ၏ယဉ်ကျေးမှု anthropological ပြပွဲမှတဆင့်, အလှည့် အတတ်ပညာ ပြပွဲ, နှင့်ရုပ်ရှင်. စုဆောင်းခြင်းတစ်ဦးရဲရင့်ထိုင်, ခေတ်ပြိုင်အဆောက်အ အယ်လ်ဂျီးရီးယားနွယ်ဖွားများကဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, Marseilles ပညာဗိသု Rudy Ricciotti, နှင့် Roland Carta. ဒါဟာ 13 ရာစုတစ် vertigo-inducing footbridge အားဖြင့်ဆက်စပ် ဝိန်း Fort စိန့်ဂျွန်, အရာထံမှရှိပါတယ် stupendous အမြင်များ အဆိုပါ Vieux ဆိပ်ကမ်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပင်လယ်၏.
Provence - အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်: Castellane
ဒါကဖြစ်ပါသည် အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော အဆိုပါ Verdon တွင်ရှိသော၏အစွန်းပေါ်မြို့. Castellane, Provence အဆိုပါ Verdon မြစ်၏ဘဏ်များအပေါ်တစ်ဦးချစ်စရာကောင်းတဲ့အနည်းငယ်သာမြို့နပိုလီယံလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ရပ်နေရာအရပ်ဖြစ်ပါသည် (လမ်းကြောင်းနပိုလီယံ) လှပသောကဝိုင်း, ရိုင်းတောင်များ. အရာအပေါ် Notre-Dame du Roc Chapel တစ်ခွင်နာမည်ကျော်ရော့ခ်ကလွှမ်းမိုး, အဆိုပါProvençal Old မြို့ပါကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဝင်္ဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါခရီးစဉ် Pentagonale တူသောခိုင်ခံ့သောဆိုငျရာအစအနရှိရှိ (ငါးတဖက်သတ်မျှော်စင်) နှင့်ဂိတ်နာရီ (နာရီတံခါးပေါက်), နှင့်လှပသောနေရာ Marcel Sauvaire စတုရန်း - Castellane ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်၏နှလုံး.
34 , rue Nationale
34 rue Nationale နပိုလီယံအပေါ်နေ့လယ်စာမှရပ်တန့်ဘယ်မှာအိမ်တော်ဖြစ်၏3မတ်လ 1815 Elba ကျွန်းမှသူ၏ပြန်လာအပေါ်. အများပြည်သူပွင့်လင်း, အလယျပိုငျး Verdon ယနေ့က ပေါ်ပြူလာအနုပညာနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများပြတိုက်.
လမ်းလျှောက်ပရိသတ်များလက်လွတ်မလုပ်ရအောက်ပါအ footpath ဦးတည်စေတဲ့အ Notre-Dame ဒုတိယ Roc chapel မွ အသင်းတော် အတွက်ပတ်ပတ်လည် 30 မိနစ်များ. ပတျဝနျးကငျြကိုကျော်ထိပ်ကနေရှုမြင် ကျေးလက် stunning ဖြစ်ပါတယ်!
Provence - အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်: ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး’ Avignon ၏နန်းတော်
တစ်ဦးအဖြစ်စာရင်း ယူနက်စကိုတို့ကကမ္ဘာအမွေအနှစ်များ, နန်းတော်၏တစျခုဖွစျသညျ 10 ပြင်သစ်တွင်အများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်အထိမ်းအမှတ. ဒါဟာရရှိသွားတဲ့ 650,000 တစ်နှစ်လျှင်ဧည့်သည်. တစ်စစ်မှန်တဲ့သင်္ကေတ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု 14 ရာစုအတွင်းအနောက်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏. မော်ကွန်းကျောက်စာတိုင်၏ဤ 15,000km လက်ရာအကြီးဆုံးအလယ်ခေတ်ခံတပ်နှင့်ဥရောပ၏အကြီးမားဆုံး Gothic အဘိဓါန်နန်းတော်ဖြစ်ပါသည်.
ဘင်နီဒစ် XII, ယင်းဆောက်သော ဟောငျးနန်းတော် အရှေ့ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်မှ. ထို့အပြင်သူ၏ဆက်ခံသူ Clement VI သည်တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်ရှိနန်းတော်သစ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်. အဆိုပါမျှော်စင်ဟာရတာဟာ 11 ဌာနဆိုင်ရာမော်ကွန်း၏ပုံပြင်များ. ၎င်း၏အမြင့် 52 မီတာသင်ခေါင်းမူးစေသည်. အဆိုပါ Utopia Manutention ၏ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ကနေမှာကြည့် ရုပ်ရှင်ရုံ, သငျတို့သကျနော်တို့အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်!
နန်းတော်စုစည်း ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ, အကွောငျး ခရီးစဉ်, ပြပွဲ, နှင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖျော်ဖြေပွဲ. ၎င်းသည်၎င်း၏မြို့ရိုးအတွင်းရှိ Musee de l'Oeuvre တွင်လည်းတည်ရှိသည်. တွင် နွေရာသီ, ပင်မဝင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေချိန်မှာကြီးမားတဲ့အနုပညာပြပွဲမဟာ Chapel တက်ယူ ပြပွဲနှင့်အတူ Open-ဝေဟင်ပြဇာတ်ရုံ အဆိုပါ Avignon ထံမှ, Provence ပြဇာတ်ရုံ ပွဲတော် အတွက်ဂျင်း Vilar အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး 1947.
လိုင်ယွန်မှ Avignon ရထားစျေးနှုန်းများ
Provence - အဘယ်အရာကိုမြင်ရန်: Avignon, လိမ္မော်သီး, Chateauneuf-du-Pape
နက်ရှိုင်းသည် ကျေးလက်ဒေသပြင်သစ်သို့ငုပ် နှင့်စပျစ်ဥယျာဉ်အကြားရောမအမွေအနှစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိ. Triumphal Arch နဲ့ Roman amphitheater မှာအံ့။ ကြ. ယင်းမှတဆင့်ထုတ်ခရီးသွားခြင်း မြေသြဇာစပျစ်ဥယျာဉ် Chateauneuf-du-Pape ၏, Provence, နှင့်နမူနာ ဒေသခံဝိုင် တစ်ဦးမျိုးစုံမြည်းစမ်း session တစ်ခုအတွင်းမှာ. ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်စာရင်းပိုတငျး du garde လေးစားပါတယ် - တဲ့ရောမရစေီးရလောမွောငျး. က Les Baux က de Provence ၏အလယ်ခေတ်မြို့သို့သွားရောက်. အဆိုပါမြင့်မားဆောက်ထားတဲ့ Alpine တောင်များ, နှင့် Gordes နှင့် Roussillon ၏Provençalကျေးရွာပေါင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ.
အဲဒီမှာ Get လုပ်နည်း?
ရထားနဲ့, ဒါပေါ့! Provence မှရထားလမ်းခရီးသွား mainline ရထားများကထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်, မြန်နှုန်းမြင့် TGV အပါအဝင်, တောင်ဘက်ပဲရစ်ကနေ, လိုင်ယွန်ကနေတဆင့်, Avignon, Aix-my-Provence, နှင့် Marseilles, ထို့နောက်မြေထဲပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် (မဟုတ်မြန်နှုန်းမြင့်) သို့ nice, ပြင်သစ်. မင်းလက်မှတ်ကိုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာရနိုင်ပါတယ် တစ်ဦးကရထား Save
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fprovence-see-get-there%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / ja သို့မဟုတ် / TR နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / က de ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#လာဗင်ဒါ #ဟုတ်ပါတယ် europetravel longtrainjourneys trainjourney traveltips winetour